NAGA SII SAAR - Shanghai Long Jie Plastics Co., Ltd.
Cidda Aynu Nahay & Waxa Aan Sameyno?
Shanghai Longjie Plastics waa soo saare xirfadle ah oo ka sameysan waxyaabaha ka samaysan PVC. Iyadoo in ka badan toban sano warshadaha iyo dhoofinta waayo-aragnimo, waxaan soo saarnay wax soo saarka baaxadda ay Xadhigga PVC, xayndaabka, xarkaha vinylka, decking, biyomareenka roobka, wax taaj oo kale PVC iyo bir iyo khadadka aluminium, iwm Kooxda Long Jie waxay ka shaqeyn doontaa R&D waxayna u fidin doontaa xalal hal abuur leh macaamiisheenna adduunka ku baahsan badeecooyinkeenna iyo adeegyadeena ugu wanaagsan. Waxaan ku kalsoonahay in Long Jie uu noqon doono wehelkaaga wanaagsan waxaana rajeyneynaa inaan kula shaqeyno!
Mashiinka wax soosaarka casriga ah
Waxaan leenahay 12 khadadka wax soo saarka extrusion, awoodda extrusion maalin kasta waa ku saabsan 30 tan, hal pelletizer iyo saddex mashiinka qodan otomaatiga ah. 2 nooc oo mashiinka jigsaw oo otomaatig ah, 2 nooc oo mashiin xardho, 3 nooc oo mashiinno barar ah, 2 nooc oo mashiinka xarigga baakadaha oo si toos ah u yaraanaya, 1 xirmo oo mashiinno goyn ah,
Xoog R & D Xoog
① maamulka kooxda
Waxaan haynaa 5 injineer oo kujira xarunteena r & d. Iyagu waa maamuleyaal xirfadlayaal ah oo dhammaantood ah hibooyin isku dhafan oo sannado badan oo khibrad bulsho iyo shaqo leh leh. Waxay ku hawlan yihiin maareynta ganacsiga, qorsheynta suuqgeynta, suuqgeynta, ganacsiga caalamiga ah, horumarinta wax soo saarka, iyo kuwa waaweyn. Waxay yaqaanaan qaababka maaraynta ee nidaamyada dhaqaale ee kala duwan.
Sifooyinka guud ee xubnaha kooxda maamulka:
Taariikh waxbarasho: Shahaadada kuliyada ama wixii ka sareeya, ganacsi xoog leh,
Khibrad shaqo: Sanado badan oo khibrad bulsheed iyo khibrad shaqo ah, waxay leeyihiin waxqabad aan caadi ahayn oo dhanka xirfadda ah iyo karti-abuurnimo aan caadi ahayn.
Xiriirka dadka: Ku yeela xamaasad xoog leh iyo xiriir sokeeye.
Tayada xirfadeed: Daacadnimo, raac ujeedada heerarka shirkadda, u hogaansanaanta sharciyada qaranka iyo anshaxa bulshada.
Xubin muhiim ah ②team:
Liu lei: Agaasimaha farsamada ee shirkadda
Agaasimaha horumarinta shirkadda iyo qaabeynta
1 ipqc xirfad leh oo leh xirfado ganacsi oo karti leh oo kuyaala qaybta dawada iyo baakadaha;
2 waxaan leenahay nidaam dhameystiran si aan u hubino soo saarida wax soo saar tayo sare leh;
3 waxaan dhiiri galin u siineynaa shaqaalaha hadba sida ay u shaqeeyaan;
5 waxaan leenahay nidaam baaris tayo leh oo badeecad leh, 2 saacadood oo kormeer dhameystiran iyo kormeer aan caadi aheyn, jawaab celin deg deg ah markii dhibaatooyinka la helo, iyo lasocodka habka xalinta ilaa dhibaatada gebi ahaanba la xaliyo, iyo qorno warbixinno aan caadi aheyn oo loogu talagalay wadarta guud ee tababarka tayada leh. xogta;
6 waxaan leenahay tababar joogto ah oo shaqaale tayo leh si aan kor ugu qaadno xirfadaheena xirfadeed iyo aadaabta anshaxeed, si aan ugu dhiirigalino inay hubiyaan in wax walba oo ay sameeyeen uu gaarsiisan yahay heerarka.
7 waxaan isticmaalnaa siyaabo kala duwan si aan u tijaabino tayada wax soo saarka.
1.) Hababka kormeerka jirka, waxaan leenahay mashiinada baaritaanka dogobka cantilever ee horumarsan, mashiinada baaritaanka kubadaha oo dhacaya, tijaabiyaasha dhagaxa adag Rockwell, mashiinada siligga, iwm.;
2.) hababka baaritaanka kiimikada, foornada heerkulka joogtada ah, tijaabiyaha gabowga, mitirka caddaanka;
3.) hababka baaritaanka bayoolojiga. Waxaan si joogto ah ugu aamineynaa alaabtayada inay tijaabiyaan hay'ad tijaabo ah oo dhinac saddexaad ah oo leh warbixin tijaabo ah; waxay kaloo u baahan tahay alaab-qeybiyaha inuu haysto warbixin tijaabo ah oo ku lifaaqan;
4.) Habka tijaabada nooca badeecada, tijaabada joogtada ah, tijaabada tijaabada, iwm;
5.) Hababka kormeerka dareenka, xubnaha kooxda tijaabinta tayada waa gacmo duug ah oo u shaqeynayay shirkadda sannado badan, waxay leeyihiin awood adag oo ay ku kala soocaan dhibaatooyinka tayada alaabteena; muunad qaadista, muunadaha ka tarjumaya astaamaha wax soo saarka si sax ah ayaa loogu qaban karaa kormeerka ujeedooyinka sayniska.
Soo dhaca tijaabiyaha kubbada
Mashiinka baaritaanka saameynta Cantilever
Sanduuqa iftiinka midabka caadiga ah
Foornada heerkulka joogtada ah
Soo Bandhigida Awoodda Wax Soosaarka
Mashiinnadayada wax-soo-saarka ayaa dhammaantood la iibsaday foomka jinwei mashiinnada co., Ltd., Guddoomiye ku-xigeenka ururka warshadaha mashiinnada caagga ah ee Shiinaha. Waxaan haynaa laba iyo toban mashiinno noocyada kala-baxa ah iyo lix mashiinno 45 nooc ah, iyo khad kasta oo wax soo saar ah wuxuu leeyahay awood wax soo saar maalinle ah oo ah 3 tan oo isku dhafan PCV ah. Soosaarida qaybta dambe iyo qaybta baakadaha waa mid aad u farsameysan, oo leh 40 xirfadlayaal xirfadlayaal ah, oo gebi ahaanba cuni kara awoodda kala-bixidda dhamaadka-hore; dammaanad qaadaya wax soo saarka maalinlaha ah ee 30 tan oo wax soo saar ah.
Ku saabsan xakamaynta tayada:
Guud ahaan bandhigga warshad:
Bandhigga shaqada warshad:
Warshadda soo-saarista shaqada:
Awoodda Farsamada Iyo Naqshadeynta Iyo Awoodda r & d
Tan iyo aasaaskeedii, waxaan had iyo jeer u hoggaansameynaa fikradda horumarinta sayniska, qaadashada cilmi-baarista tikniyoolajiyadda iyo horumarinta iyo tababarka shaqaalaha oo ah yoolalkayaga horumarineed. Waxaan leenahay waax r & d heegan ah, oo ku tiirsan taageerada farsamo ee ka timaadda xarunta shanghai, oo waxaan leenahay khibrad hodan ah iyo shaqaale farsamo iyo hal abuur cusub. Waxaan ahmiyad weyn siineynaa cilmi baarista iyo horumarinta alaabooyinka cusub ama habab cusub, waxaan maalgelin ku sameynaa qadar badan oo cilmi baaris ah iyo horumarin sanad walba, waxaan ku guuleysanay natiijooyin aad u wanaagsan, waxaanan dalbanay dhowr shati.
Baadhitaanka iyo soosaarka wax soo saarka, waxaan xoojinaynaa isdhaafsiga iyo iskaashiga machadyada cilmi baarista ee gudaha iyadoo la raacayo horumarka tikniyoolajiyadda iyo baahida suuqa. U beddel natiijooyinka cilmi-baarista sayniska wax soo saar iyada oo loo marayo hordhaca teknolojiyadda iyo horumarinta iskaashiga, iyo in faa'iidooyin loo abuuro shirkadaha. Waqtigan xaadirka ah, waxaan soo saarnay noocyo kala duwan oo dayrar ah iyo waardiyeyaal ku habboon beeraha badan, oo ay ku jiraan jardiinooyinka, ilaalinta gudaha, barxadaha, jardiinooyinka, beeraha fardaha iyo noocyo kale oo noocyo ah, si badeecadahu ay si buuxda ugu iibiyaan dalalka Yurub, Mareykanka, Australia. , zealand cusub iyo koonfur bari Asia. Dhul.
Waxaan sameynay xiriir wada shaqeyn muddo dheer ah iyo xiriir horumarineed kooxda anhui conch, waxaanna ku sameynay cilmi baaris qoto dheer iyo horumarin ku saabsan sifooyinka jireed iyo kiimikada ee qaabeynta muuqaalka banaanka, waxaana helnay natiijooyin wanaagsan. Xayeysiinta iyo adeegsiga suuqa, macaamilku aad buu ugu qanacsan yahay waxaana si aqlabiyad leh u aqoonsaday macmiilku.
Nidaamyada Maamulka Shirkadda & R
1) kadib helitaanka tilmaanta r ​​& d, waaxda farsamada ayaa abaabusha kooxda naqshadeynta iyo horumarinta, waxay go'aamisaa hogaamiyaha naqshadeynta, waxay dejisaa qorshaha naqshadeynta r ​​& d, waxayna diyaarisaa "Qorsheynta iyo qorshaha horumarinta"
2) qofka mas'uulka ka ah nashqadeynta ayaa go'aamiya waxyaabaha ay ka koobanyihiin is-dhexgalka farsamo ee kala duwan iyadoo loo eegayo qorshaha nashqadeynta iyo astaamaha iyo shuruudaha wax soo saarka, wuxuu u gudbinayaa isgaarsiinta farsamada dhamaan nashqadeeyayaasha, wuxuuna soo ururinayaa "Liiska qaabeynta naqshada iyo horumarka".
3) naqshadeeyaha wuxuu naqshadeeyaa nidaamka wax soo saarka iyadoo la raacayo qaabka naqshadeynta. Agaasimihii farsamada ayaa isugu yeeray shaqaalihii ay khusaysay si aan uqabano mudaharaad qorshe ah. Ka dib marka qorshaha la meel mariyo, qofka mas'uulka ka ah naqshadeynta wuxuu fuliyaa naqshad farsamo sida ku cad qorshaha la ansixiyay, oo ay ku jiraan sawirro iyo habraacyo, wuxuuna abaabulaa shaqaale ku habboon oo dib u eegis ku sameeya naqshadeynta, sameeya diiwaanno, una diyaariya "Warbixinta Naqshadeynta iyo horumarinta"
4) naqshadeeyaha wuxuu ku sameeyaa xaqiijinta baaritaanka badeecada iyadoo lagu saleynayo natiijada dib u eegista, wuxuuna diyaarinayaa "Warbixinta xaqiijinta naqshadeynta iyo horumarka"
5) ka dib marka tijaabada nooca wax soo saarku ay u qalanto, naqshadeeyaha ayaa sawiri doona sawirka wax soo saarka wax soo saarka iyo habka wax soo saarka wax soo saarka, hogaamiyaha naqshadeynta ayaa dib u eegi doona, agaasimaha farsamada ayaa soo saari doona ka dib ansixinta, wuxuuna diyaarin doonaa "Liiska Naqshadeynta iyo soo saarida horumarka".
6) ka dib marka la soo saaro dukumiintiyada farsamada badeecada, waaxda ganacsigu waxay amar ku bixisaa shaybaarrada, waaxda waxsoosaarkuna waxay samaysaa shaybaar sida ku cad dukumiintiyada farsamada; naqshadeeyayaashu waxay falanqeeyaan oo muujiyaan shay-baarka waxayna sameeyaan warbixinno kooban oo soo-saaris ah.
7) ka dib soosaarka tijaabada tijaabada tijaabada ah ee guuleysta, wax soo saar dufcad yar ayaa la sameyn doonaa. Qofka mas'uulka ka ah naqshadeynta wuxuu ku xaqiijiyaa waxqabadka sheyga iyo tilmaamayaasha farsamo iyadoo loo marayo tijaabada waxqabadka farsamada wax soo saarka iyo jawaab celinta isticmaalaha, wuxuuna diyaarinayaa "Warbixinta xaqiijinta naqshadeynta iyo horumarinta".
8) ka dib naqshadeynta la dhammeeyo, qofka mas'uulka ka ah nashqadeynta ayaa had iyo jeer fiiro gaar ah u leh isticmaalka alaabooyin cusub wuxuuna si joogto ah u hagaajiyaa alaabada cusub.
Samee dhaqan "Shirkad-xuddun u ah" shirkad. Lixda cunsur ee dhaqanka shirkadaha: Qiimaha, tayada, adeegga; ujeeddooyinka, habka, iyo qiimeynta. Hal-abuurnimada farsamada iyo hal-abuurnimada maaraynta waxay ku socotaa dhammaan howlaha dhismaha dhaqanka shirkadaha.
Iyagoo wajahaya xaalada cusub iyo fursadaha cusub, suzhou langjian waxay soo bandhigtay fikrada istaraatiijiga ah ee "Qarniga shirkad, hal-abuurnimada boqol-sanolaha, astaanta boqol-sanolaha ah".
1) istiraatiijiyad caalami ah ayaa ka bedeshay shirkad khibrad gaar ah leh oo Shiine ah una wareegtay shirkad casri ah oo leh calaamado caalami ah iyo karti wax soo saar iyo wax soo saar xirfadeed.
2) istiraatiijiyad dhexgalka suuqa-hagaajinta bartilmaameedka suuqa.
3) istiraatiijiyad horumarinta wax soo saarka-soo saar alaab tayo sare leh
Shirkadda Sawirka Kooxda Macaamiisha
Bandhigga Kiiska Mashruuca
Bandhigga Awoodda Bandhigga